Eyona ndawo ithengiswayo yokuthengisa isampu yelanga
Iphaneli yokuhlamba / ikholamu
Shower Head kunye eyongezwayo
Isixhobo: I-PVC + ABS ene-chrome
Amandla: iilitha ezingama-40
Ubushushu bamanzi: Ubuninzi: 60 ° C
Shower intloko ubukhulu: 15cm
Imilinganiselo: malunga. 217 × 16.5 × 16,5 cm
Imilinganiselo yepleyiti esezantsi: 20 × 18cm
Ukufakwa kwezixhobo zokungena: Izikrufu kunye needowels (zibandakanyiwe)
Uqhagamshelo: Via umbhobho wegadi osemgangathweni (kubandakanya iadaptha)
Ubunzima bomzimba: malunga. 9 kg
Uxinzelelo lwamanzi: Maximun: 3.5 bar
Ukupakisha 40'HQ Ubunzima Ubungakanani bebhokisi yangaphandle (cm)
Ibhokisi ibhokisi 650 11.0 10.0 1.00 113.50 42.00 22.00
Ishawa yelanga yangaphandle
Xa sidlala ngaphandle, kufuneka sizicoce. Nangona kunjalo, izixhobo zokuhlamba zendabuko zingafakwa kuphela ngaphakathi, ezingenako ukuhlangabezana neemfuno zokuhlamba ngaphandle. Ikholamu yethu yokuhlamba yenza le mfuno. Ingasetyenziselwa kwizitiya kunye neelwandle. Emva kokuqubha, abasebenzisi banokusebenzisa amanzi afudumeleyo kule ishawa ukuhlamba ukungcola okuseleyo kwimizimba yabo.
Le shawa inenxalenye ephambili kunye nezinto ezimbalwa, ezenza kube lula ukudibana. Ngokwemiyalelo esiyinikwe, kufuneka ufumane indawo echanekileyo kuphela, ulungelelanise imijelo yamalungu aphezulu nasezantsi, emva koko ujikeleze ukulungelelanisa. Emva koko, kufuneka uyixhume kumgangatho oqhelekileyo wegadi kwaye uyifake kumgangatho othe tyaba, kwaye ungayisebenzisa ngokwesiqhelo.
Izinto ezikumgangatho ophezulu
Ukuqinisekisa ubomi babo bokusebenza kunye nokuzinza, iishawari zethu zelanga zenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, kubandakanya ubhedu olunganyangekiyo umhlwa kunye nemibhobho ehlanganisiweyo yePVC. Ezi zinto zikumgangatho ophezulu zinokuqinisekisa ubuninzi beenkonzo zobuninzi kwikholamu yeshawari. Umgangatho oqinisekileyo sisithembiso sethu esikhulu kubathengi.
Ilanga linikwe amandla
Njengoko sonke sisazi, ukukhanya kwelanga sesona sixhobo sigqithisileyo kwiindawo ezingaphandle njengaselwandle. Sisebenzisa ngokupheleleyo oku ukwenza ikholamu yeshawari yokonga amandla kunye nokusingqongileyo. Ishawa yelanga yangaphandle i-100% inikwe amandla lilanga. Ayisebenzisi iingcingo kunye neebhetri
Intloko yeshawari eguqukayo
Ukutshiza okuphezulu kunokujoliswa ngokwendlela yokuhlanjwa kwabantu kunye nokuphakama. Uyilo lomntu lwenza ishawa yangaphandle ibe lula ngakumbi.
Ngenxa yesikwere, le ishawa yelanga inesona sixhobo sikhulu. Kufanelekile ukuba isetyenziswe kwishawari yenani elikhulu labantu. Uyilo lwesikwere lukwanika imvakalelo yobuhle yomgca.
mnyama, isilivere, isilivere + isandla ukutshiza, ubhedu
Egqithileyo Igumbi lokuhlambela lokuhlambela ngombhobho eligqwesileyo elisemgangathweni ophezulu-Eyona ndawo ithengiswayo yokuthengisa isikwere ishawa - iKangrun
Okulandelayo: ishawa yetyalar kunye neshushu seqondo lobushushu
Wenzhou Kangrun Ucoceko Wares Co., Ltd.
Ngo-9 kusasa ukuya ku-6 ngokuhlwa